Antontan’isa eto Madagasikara « Banga ny resaka sosialy, kolikoly, tsy fandriampahalemana »
Fanondranana lavanila taona 2019 Niakatra 15% ny tombombarotra
Raha oharina ny taona 2018 dia niakatra 15% ny tombony azo tamin’ny fanondranana lavanila teto Madagasikara tamin’ity fiandohan’ny taona ity.
Sehatry ny fizahantany Mila miezaka mafy i Madagasikara
Nahatratra 196.806 isa ireo mpizahatany nandalo teto Madagasikara hatreto ho an’ity taona 2019 ity raha toa ka 183.372 tamin’ny taon-dasa, izany hoe nitombo 13.434.
Taona 2019 Rongony 900 kilao hatreto no sarona
Tamin'ity taona 2019 ity dia 900 kilao ireo rongony saron'ny mpitandro ny filaminana ka anisan’izany ny heroïne, ny cocaine ary ny cannabis izay matetika saron'ny mpitandro ny filaminana eny amin'ny fadin-tseranana.
Tetikasa Af-Rice Nampiakatra ny voka-bary
Ny faritra Alaotra Mangoro sy Itasy ary Vakinankaratra no nanatanterahana ny tetikasa andrana Af-Rice noho ny fihenan’ny voka-bary tany.
Fifandraisana ara-barotra maneran-tany Hita ho sahirana i Madagasikara
Efa maro sahady ireo atrikasa natao sy fifanarahana nosoniavina tamin’ireo firenena matanjaka hatramin’ny niovan’ny fitondrana.
Ny tolo-dalàna mety dia ny mandrindra ny atao hoe « système statistique régional », izany hoe ingaina any ifotony ny fanisana, hoy ny manampahaizana momba ny antontan’isa, Ndremitsara Tarzan, raha naneho ny heviny mikasika ny tolo-dalàna tokony hatolotr’ireo ho depiote mikasika ny resaka fanisam-bahoaka.
Tsy maintsy apetraka anatin’ny lalàna io ary mila didy fampiharana. Ilain’ny depiote ny manara-maso an’io, indrindra ireo fanisana miainga avy any amin’ny kaominina, mandalo distrika ary miafara any amin’ny faritra, hoy izy. Mba tsy hijanona any ambony fotsiny fa hirindra avy any ifotony mihitsy ilay fomba fanisana. Izay no isan’ny tsy ampy eto Madagasikara noho izy tany midadasika. Finiavana politika talohan’ny taona 2016 tany ho any no tsy nisy nahatonga ny tsy fahatomombanana. Ny filohan’ny rafitra rehetra mihitsy no tokony handray an-tanana izay anefa, hoy izy, ary isan’izany ny filoham-pirenena. Isan’ny banga, ohatra, ny resaka fananana antontan’isa amin’ny resaka kolikoly, sosialy, tsy fandriampahalemana kanefa mila refesina ireny ezaka ireny mba hisian’ny fitantanana mangarahara na “bonne gouvernance” sy hananana ny antsoina hoe “sécurité statistique”. Tokony isaky ny 10 taona ny fanisambahoaka raha resaka fifindra-monina ary isaky ny 5 taona raha resaka toekarena. Izay no fenitra iraisampirenena. Mila hampidirina ao anaty tetibolam-panjakana izany ary mila ny fifankatiavan’ny Malagasy hanome ny vaovao marina momba ny fanisana hametrahana fitoniana politika, hoy hatrany ity manampahaizana ity. Ho an’ny mpahay tantara, Hemerson Andrianetrazafy, lesoka lehibe tsy nahafahana nifehy ny fivezivezin’ny mponina ary nety ho nitarika tsikelikely amin’ny resaka tsy fandriampahalemana ankehitriny koa ny fanafoanana ny karatra isan-dahy tamin’ny repoblika faharoa.